फूलपातीको बढाइमा प्रधानसेनापति शर्मा अनुपस्थित किन ? « Nepal Bahas
फूलपातीको बढाइमा प्रधानसेनापति शर्मा अनुपस्थित किन ?
प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०७८, बुधबार ०६:०७
२७ असोज, काठमाडौं । फूलपातीको बढाइमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उपस्थित भएनन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुने सो कार्यक्रममा प्रधानसेनापति शर्मा उपस्थित नहुँदा कौतुहलता उत्पन्न भएको थियो ।
भाइलर ज्वरोले च्यापेपछि सैनिक मञ्चमा आयोजित फूलपाती बढाइँमा प्रधानसेनापति शर्मा अनुपस्थित भएका हुन् । उनको अनुपस्थितीमा बलाधिकृत तथा बलाध्यक्षको जिम्मेबारीमा रहेका रथी बालकृष्ण कार्कीले फूलपाती बढाईँको नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौड्यालले प्रधानसेनापतिलाई ज्वरो आएको कारण सहभागि हुन नसकेको बताए । ‘स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै उहाँ समारोहमा सहभागि नहुनुभएको हो,’ प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए । सिजनल फ्लु अर्थात भाइरल ज्वरो आएको कारण पनि प्रधानसेनापति शर्मा सहभागी नभएको पनि सहायक रथि पौड्यालले बताए ।
रोयलवक्समा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरुसँग रहनु पर्ने हुनाले पनि प्रधानसेनापतिले सबैको स्वस्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सेनाभित्र छलफल गरेर सहभागी नभएका हुन् । प्रधानसेनापतिलाई ज्वरो आएपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजामा नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाद्वारा आयोजित उक्त फूलपाती बढाईं समारोहमा सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्री गण, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरु, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवहरु, अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु, पूर्व प्रधानसेनापतिहरु, बहालवाला रथीवृन्द लगायत सञ्‍चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।